I-Zagg, elona galelo lilungileyo le-Ipad-Geofumadas
NgoJanuwari, 2011 Apple - Mac, ezintsha
Enye yeengxaki eziphambili zokuguqula i-ipad yibhodibhodi. Kuya kubakho oqhelekileyo, kodwa emva kwenyanga ndiza kwisigqibo sokuba ezi zizathu zithintela:
Ngakolunye uhlangothi iminwe yam inamanqatha, kwaye ukusetyenziswa kwebhodibhodi kuyandichukumisa. Iminyaka eyi-25 kamva ndixabisa inkambo yam yokuthayipha njengesipho esona sihle kunokuba udadewethu anganginika yona, nangona kwakufuneka ibe ne-olivetti yomsindo; kodwa kwibhodibhodi ekhoyo kwaye ayikwazi ukuziva iyanzima.
Kwakungekho nesimo esihle kakhulu esifanele sifumaneke ngenxa yokuba kubangele intlungu kwiimbumba. Ndapopote isicelo esenza ikhibhodi ibe bubungakanani obungokweziko, iwaphule zibe zibini, idibanise ukuba ilase. Kodwa akukho, unomdla kodwa ungumntwana.
I-Apple ithengisa ikhibhodi eyongezelelweyo engenazintambo, kodwa iya ku-$ 100 kunye nesiseko esibiza nge-$ 90. Ndicinga ukuba bayayenza ukuze abantu bangabathengi kwaye basebenzise ukusebenzisa izipikili zabo. Ngaphandle kwevolumu eyongezelelweyo ekufuneka ilayishwe, ayinangqiqo, kuba kungcono ukuhamba ngeNetbook.
Ngoko, ngaphandle kwamanyathelo amaninzi kunye nendlela enqwenela ngayo ukuba ibhulogi ishiywe ikhefu ndifumene isixhobo esizibuzayo esibizwa ngokuba ZAGG Umtshato. Intengiso yakho yonke indawo uhamba nale tablet usebenzisa i-AdSense ads. Makhe sibone oko kudlala oku:
1. Isebenza njengesigubungelo. Ngexesha lokuba ngumbhobhobhodi, isebenza njengesikhuselo sebhebhile. Ukukhusela okulungileyo, ukukhanya okuphezulu, kunye nokuyila okungahambi kakuhle kwe-aluminium kunye neembombo zangaphakathi zerabha zangaphakathi.
2. Ayifuni izixhobo. Inentambo kodwa iya kuhlawulwa nge-USB kunoma yisiphi isixhobo okanye ishaja esisekela le slot. Isebenza ngeBluetooth, kufuneka ulandele amanyathelo athile:
Kufuneka unqumle inkinobho ye-bluetooth ngepantsi kwipeni, ngoko kwi-Ipad iya kwi:
Izicwangciso / jikelele / i-bluetooth kwaye kukho ukhetha ifowuni. Emva koko ufaka ikhowudi oyithethayo kwaye uyenziwe.
Amaqhosha abonakala kum enobungakanani obamkelekileyo, ndicinga njenge-Acer Aspire One.Ndisazokufumana amaqhinga afana nokutshintsha ulwimi ukufumana iikhowudi zedekhowudi yedama, i-Ctrl C kunye ne-Ctrl V ukuba andinalwazi lokuziqhuba. Kufuneka ndifunde…
Ngokombono wam, isixhobo esikhulu. Zagg thumela kunoma yiyiphi inxalenye yehlabathi, kule ngxaki ngokungenako ukukhawuleza ndiyikhethile ngeposi eqhelekileyo, ehamba ngaphantsi kwe-$ 7 kwaye kwiiveki ezintathu sele ifikelele kwimeko engenzi ukuba ufuna ukuyiphosa.
Umzekelo onomdla wokusebenzisa inzuzo yeekhompyutha ze-Apple. I-Zagg ithengisa ezinye iigadgets, kubandakanywa izigubungxube zezinto ezicwangcisiweyo, kubandakanya enye eyenza ibonakale njengencwadana yokusebenza elula ukuhamba ngesitalato ngaphandle kokutsala ingqalelo.
Ngoku ndifuna umhleli we-WYSIWYG omuhle weWindowsPress, ngokuba iBlogPress ngoku kude ishiya into enqwenelekayo. Isebenza kuphela kwiinguqulelo zakutshanje, ezizongena kwi-MU, eyona iqonga apho iKaresiesianos.com ifakwe khona.
Akukubi ukubuyela kwiitampu ze-html, kodwa ngelo xesha alwamkelekanga, into engcono kakhulu eyenzekayo kukuba loo maPhepha aneemfanelo zomphathi wokuqukethwe.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ares, enye i-CAD ye-Linux kunye ne-Mac
Post Next Hlaziya idatha enkulu kwi-WordPressOkulandelayo »
3 Uphendula "Zagg, oyena mntu uncedisa i-iPad"
Ndikunikwe ityala lebhodi yeKensington yam ipad 2 yam. Nangona kufuneka ndivusa nokuba ubukhulu bayo buncinane, bubonakala buhle. Ngaba kukho umntu owaziyo ukuba kukho imigaqo yebhodibhodi? Kukho izihluthulelo andingazi ukuba ziphi.
Kwi-Ipad2 yahlukile, kuba umbhobho utshintsha indawo, inayo kwaye nendlela ebisijika ngayo yahlukile emva nasemaphethelweni. Le ayisebenzi enye, nangona kunjalo, kubukhulu bayo ziyalingana, kwaye zinobunzima.
Umbuzo ngoku ukuba i-ipad 2 entsha sele isetyenziswe ikhibhodi ye-zagg ye-ipad1 ye-ipad2? uyazi oku? kuba ndiyifunde kakade kwiphepha le-zagg kwaye bayalinganisa, balinganisa kwaye benze into efanayo ukuze ndiyazi ukuba bayasebenza kwi-2. UYAZI? IIMVUMO kwaye ndiyavumelana nawe umgca we-key ye-zagg yi-maximooo